Aqoonyahanka Itoobiya Oo Tuhunsan In Masar Ku Lug Leedahay Rabshadaha Socda | Berberatoday.com
Aqoonyahanka Itoobiya Oo Tuhunsan In Masar Ku Lug Leedahay Rabshadaha Socda
Addis-ababa(Berberatoday.com)-Ra’isulwasaaraha Itoobiya, Hailemaraim, ayaa dhawaan sheegay in kacdoonka Itoobiya ay ku lug leeyihiin xoogag shisheeye oo aan doonayn in dalkiisu ka faa’iideysto khayradkiisa. Desalegn ma magacabin xogagaas, balse waxaa jira dareen xisbiga EPRDF ka qabto dalka Masar oo ay ku muransan yihiin adeegsiga wabiga Nile.
Shakhsiyaad taageera dawlada oo lagu sheegay indheer-garad ayaa warbaahinta dalka u sheegay in ay cadahay in Masar faraha kula jirto arrimaha gudaha ee Itoobiya. kooxdan ayaa doodooda ku saleeyey muuqaalo laga duubay koox Oromo ah oo ku sugan Masar oo lagu tilmaamay OLF.
Aqoonyahanka Itoobiyaanka ah oo u badan barayaal wax ka dhiga jaamacadaha wadanka ayaa sheegay in ayna Masar ka waantoobayn in ay carqaladeyso Itoobiya maadama ayna u cuntamayn in wabiga Nile Itoobiya ka faa’iideysato.
Macalimiinta ayaa tusaale u soo qaatay sida Tv-yada Masaaridu u buunbuuniyeen rabshadaha ka dhashay xuskii Oromada ee Axadii dadka badan ku baaba’een.
Dawlada Itoobiya ayaa marna si rasmi ah farta ugu fiiqin Masar, Kooxda aqoonyahanada ah ayaa ugu baaqay dadweynaha Itoobiya in ay ka digtoonadaan shirqoolada laga soo maleegayo Masar.